Anigu waxaan leeyahay iPod ... Maxay Tahay?
IPhone & iPod Aasaaska
Anigu waxaan ahay iPod - Hadda maxaa?
Tilmaamaha Bilawga ah ee iPod
Adigu waxaad tahay qof haysta ra'yi lihi oo ah iPod cusub. Hadday timaaddo munaasabada dhalashada, hadiyad fasax ah, ama aad ahayd wax aad isula dhaqantay, markaad furantay sanduuqa, waxaad dareentay masuuliyad ah farxad. Waxaad rabtaa inaad ku raaxaysato madadaaladaada cusub.
Waxaad is waydiin kartaa naftaada, inkastoo- gaar ahaan haddii tani tahay iPod-kaaga ugu horeeya-halkee ayaan bilaabayaa? Boggan wuxuu ku siinayaa si dhakhso ah oo aad u hesho qoraallada ku yaala bogga aad ka heli doonto faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee marxaladaha hore ee aasaasida iyo isticmaalkaaga iPod.
Haddii aad leedahay iPod taabasho, maqaalkan ayaa kuu fiican . Waxay ku saabsan tahay iPhone, laakiin waxay ku dhowdahay dhammaanteed taabashada taabashada, sidoo kale.
Kuwani waa aasaasiyadaha: hubinta inaad haysatid software-ka iyo xisaabta loo baahan yahay, kadibna sida loo isticmaalo si loo abuuro iPod-kaaga iyo inaad bilowdid.
Ku dheji iTunes on Mac | on Windows
Abuur Akoonta iTunes
Tilmaan ku saabsan sida loo sameeyo iPods:
Marka iPod-ga la sameeyo, waxaad rabtaa inaad barato sida loo sameeyo waxyaabo asaasi ah. Qeybta ugu muhiimsani waa mid caqli gal ah, laakiin maqaalahani waxay kaa caawin doonaan inaad sii wadato.
Ka heeso CD-ga illaa iPod
Iibsiga Muusikada dukaanka iTunes
Isticmaal liistada Play Smart si aad u ilaaliso meel
Adeegsiga iTunes Genius
The Best Transmitters Carabka ugu fiican
Iyada oo la adeegsanayo raadiyaha FM-ka ee iPod nano
How-Tos for Model kasta
Ma rabtaa in aad dhab ahaantii barato dhammaan ins iyo kobcinta qaabkaaga? Riix linkka hoose ee iPod ee aad u baahan tahay inaad akhrido habka sugida, dib u eegista, tabaha, iyo maqaallada wax ka qabashada oo kaliya ee loo qoondeeyey qaabkaaga gaarka ah.
Dhibaatooyinka Dhibaatada iPod
Sida kombiyuutar kasta, mararka qaar wax khalad ah ayay ku jirtaa iPod-ga. Markay khalad yihiin, way fiicantahay inaad ogaatid sida loo saxayo.
Sida loo Furo Tilmaamaha iPod
Sida loo bilaabo iPod nano
Sida loo Furi karo Shuffle iPod
17 Talooyin ku Saabsan Batroolka Bariiska Batroolka
Ka Hortagga Xatooyada iPod
Raadi talooyin sidaan oo kale ah oo loo soo diro emailkaaga asbuuc kasta? Ku soo celi email-ka bilaashka ah.
Sida loo Isticmaalo Safarka Webka Safari ee iPhone
Sida loo xiro iPadkaaga
Sida loola wadaago Nambarka Korontada ee iPhone
IPhone X Hoyga Aasaaska
IOS 6: Aasaaska
Apple ayaa sii deyneysa $ 100 kiis batrool ah oo ah iPhone 6 iyo 6S
Samee 12-ka Waxyaabaha Ugu Horeeya Marka Aad Ku Nooshahay iPhone Cusub
IPhone 4 Dhibaatooyinka Dhacdooyinka Antenna - iyo Qalabayn
Cudurka Tiknolojiyada ee iPhone: Waa Maxay Tahay Iyo Maxaad Kaga Qaadantahay
Sida Loo Helo Keydintaada Windows 8 ama 8.1
Ku dar Lix Jir (Single Line) ee Dreamweaver View View
Qalabka Alien Breed - Iskaashiga PC-ga Bilaashka ah
24 Tumblr Kaararka Maalinta Jacaylka ee Internetka
10ka ugu xun ee ku saabsan iPad
Farqiga u dhexeeya Dhexdhexaadinta Dukaamada iyo Diiwaanada Guriga
Hordhaca Wi-Fi Wi-Fi ee Gawaarida
Sida loo cusbooneysiiyo Shahaadada horumarinta Apple
Waa maxay Microwave Smart?
Sida loo xiro Qalabka USB-ga ah ee la qaadan karo
Dhammaan ku saabsan Google News
Listvc (Recovery Console)
Sida loo xusuusto Missing Hal.dll ee ku saabsan Windows XP
Dhammaan ku saabsan Heshiisyada Cryptocoin iyo Heshiisyada Smart
Diiwaanka DVD-ga ma heli karaa barnaamijyada TV-ga keydka ah ee Rikoorka?
Sidee loo Isticmaalaa Wadooyinka Motion ee loo yaqaan 'PowerPoint Graphics'
Sida loo helo Mac ama Windows font files
Miyay Ku Hadlaan Kuwa Ku Dhaqmaya Buundada?